Apg29 usebenzisa cookies.
Xa ucinga Apg29 kwaye usebenzise iimpawu zayo, uyavuma ukuba ukusetyenziswa cookies.
Apg29 usebenzisa cookies. Cookies in Swedish. Kungenxa kwiphepha ukusebenza kakuhle kwaye ulwazi lwakho olungcono.
Phakathi kwezinye izinto, cookies ngohlobo izimvo kuwe ekuhlaleni ukuze ukwazi ukugcina igama lakho nge-imeyili ukuze akukhange uzalise yona lonke ixesha ubhale izimvo. imeyili negama (okanye igama lomsebenzisi) lakho igcinwe kwiziko ledatha ukuba akunjalo kuluntu. Cookies ekwasetyenziselwa manani Google.
Cookies zi iifayile amancinci agcinwe ekuhlaleni kwi khompyutha yakho. Asiyonto ikeyiki udle. ;) Ungakwazi ukuseta ibhrawuza yakho ufuna ezi fayile ukusebenza ngayo, ufuna ukuba okanye hayi. Cima ngokupheleleyo isixhobo njengoko umngcipheko wokuba iphepha ayisebenzi njengoko injongo.
Unga nqakraza i kwebhanile info ngezantsi malunga cookies, nqakraza i "Ndiyaqonda" size siqhubeke evule Apg29.
Nceda uqhagamshelane nam xa unemibuzo kule okanye ubhale izimvo ngezantsi.
Enkosi ngokundwendwela i site blog Apg29.Nu!